Let's Go and Walk to Our Brighten Future.: November 2008
Posted by Peaceful Walking at 12:08 PM0comments
Posted by yahutha at 11:59 AM0comments
Posted by yahutha at 11:37 AM0comments
Posted by Peaceful Walking at 2:59 AM0comments
Posted by yahutha at 2:00 AM0comments
နောက်ထပ် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၇ ဦး နယ်ဝေးထောင်များသို့ ပြောင်းခံရ
အဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူ ၂၇ ဦးကို ဝေးလံတဲ့ထောင်တွေ
ဆီ ဒီနေ့ ဆက်ပြောင်းခဲ့ပြီး အဲဒီထဲမှာ ရန်ကုန်တိုင်း သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်က ချိတ်ပိတ်ခံ
ထားရတဲ့ မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက် ဆရာတော်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ မနေ့တုန်းကလည်း
Generation Wave လို့ခေါ်တဲ့ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ အစည်းအရုံးက အဖွဲ့ဝင် ၂ ဦး
ကို ထောင်ဒဏ် ၈ နှစ်ဆီ ချမှတ်လိုက်ပါသေးတယ်။ ဒီကိစ္စတွေကို နိုင်ငံတကာ
လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းတွေက အမြန်ဆုံး အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံ
အခြေစိုက် အေအေပီပီ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းက
နေ့စဉ် အသိပေး တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ဗွီအိုအေ
၀ိုင်းတော်သား ကိုကျော်အောင်လွင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒီနေ့လည်း ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူ ၂၇ ယောက်ကို မိသားစု
တွေနဲ့ဝေးလံတဲ့ ထောင်တွေဆီ ပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့အကြောင်း အန်န်အယ်လ်ဒီပါတီ
"ဒီနေ့ ၂၇ ဦးပြောင်းတယ်။ ကျနော်တို့ အန်န်အယ်လ်ဒီကရော၊ သံဃာတော်တွေလည်း
ပါတယ်၊ အခြားဆိုက်ကလည်း ပါတယ်။ အီစမိုင်က ဘားအံကိုပြောင်းတယ်၊
အန်န်အယ်လ်ဒီက ကိုတင်ဝင်းနဲ့ ကိုအောင်မြင့် မြစ်ကြီးနား၊ ဦးဣိန္ဒကခေါ်
အောင်သန်းမြင့် သူက မဂ္ဂင်ဆရာတော် လားရှိုး၊ ဦးအိန္ဒရိယ (ခ) ဂျောင်းဂျောင်းခေါ်
ကိုအေးမောင်ကြီးက သီပေါ၊ ဦးပဏ္ဍ၀ံသခေါ် ဦးဖေကျော် စစ်တွေ၊ ကိုသိုက်မင်း
အန်န်အယ်လ်ဒီက သီပေါ၊ ကိုအောင်သန်း သံတွဲ၊ ခင်မောင်လတ် ကျောက်ဖြူ၊
ညီညီမင်း အန်န်အယ်လ်ဒီက သံတွဲ၊ ဦးဖိုးကြွယ် မြစ်ကြီးနား၊ အောင်သိန်းလွင် ဗန်းမော်၊
အန်န်အယ်လ်ဒီလူငယ် နေဇာမျိုးဝင်း ရမည်းသင်း၊ ထွန်းဝေထွန်း လားရှိုး၊
ကိုအုန်းကျော် အန်န်အယ်လ်ဒီ ဒေါပုံ လားရှိုး၊ အောင်ကျော်ဦး အန်န်အယ်လ်ဒီလူငယ်
လားရှိုး၊ ကိုကျင်လှိုင် အန်န်အယ်လ်ဒီ ပခုက္ကူ၊ ကိုသန့်ဇော် အန်န်အယ်လ်ဒီလူငယ်
ဟင်္သာတ၊ ကိုဇော်မင်း အန်န်အယ်လ်ဒီ သံတွဲ၊ ဇော်ဇော်အောင် အန်န်အယ်လ်ဒီ
သာယာဝတီ၊ ခင်မိုးအေး သရက်၊ အောင်ကျော်မိုး အန်န်အယ်လ်ဒီ မြင်းခြံ၊ ဒေါ်ခင်အေး
ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေးက မြောင်းမြ၊ ၈၈ မျိုးဆက်လူငယ်ထဲက စည်သူမောင်ရဲ့အဖေ
ကိုပီတာ လွိုင်ကော်၊ လှိုင်မင်း သီပေါ၊ မင်းမင်းစိုး မြင်းခြံ၊ မပဲ သာယာဝတီ၊ အဲဒီလူတွေ
မနေ့တုန်းကလည်း Generation Wave လို့ခေါ်တဲ့ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ အစည်း
အရုံးက ပုဂ္ဂိုလ် ၂ ဦးကို ထောင်ဒဏ် ၈ နှစ်စီ ချမှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်း သူကပဲ
"မနေ့တုန်းက အမိန့်ချလိုက်တာ Generation Wave က စောမောင်ရယ်၊ ကျော်ဦးရယ်
ကို ၈ နှစ်စီချလိုက်တယ်။ ကြည့်မြင်တိုင်တရားရုံးကနေ ချတယ်။ သူတို့ကို ၅/၆ နဲ့
အေအေပီပီဘီလို့ခေါ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီ
စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း မြန်မာနိုင်ငံက အခုလို မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး
လှုပ်ရှားသူတွေပေါ်မှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံ
တကာအဖွဲ့အစည်းတွေက အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ သူတို့တွေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အသိ
ပေးနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ အေအေပီပီအဖွဲ့က
"ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ စာရင်း
ဇယားတွေ ပြုစုပေးတယ်။ ဘယ်သူတွေကို ဘယ်ထောင်ပို့လိုက်တယ်၊ ဘယ်သူတွေက
ထောင်ဘယ်လောက်ကျတယ်၊ အဲဒါတွေကို ကျနော်တို့က နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ပြုစုပြီးထားတဲ့
စာရင်းဇယားတွေကို နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဥပမာ
ဟောင်ကောင်မှာရှိနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း AHRC၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ
ခွင့်အဖွဲ့ Amnesty International ပြီးရင် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ ဒါတွေကို အချက်
အလက်တွေ စုဆောင်းပြီး ပေးပို့တယ်။
"သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကနေ ဒါတွေကို အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်အောင်
တဖက်မှာ သူတို့ကလည်း လုပ်ဆောင်နေကြတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲ ယူအန်ကနေ
ပြီး ဒီကိစ္စတွေအပေါ်မှာ အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့၊ ဒါတွေဟာ မသင့်တော်တဲ့အကြောင်း
မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်က အခုလိုမျိုး ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူတွေကို ဝေးလံတဲ့
ထောင်တွေကို ပို့ပစ်တဲ့အတွက် မိသားစုတွေအနေနဲ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံဖို့ အခက်အခဲ
တွေ ကြုံနေရတဲ့အပြင် ဘယ်သူတွေက ဘယ်ထောင်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတာကို
အတိအကျ စုံစမ်းလို့မရတဲ့အတွက်လည်း သူတို့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေက စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ
Posted by yahutha at 2:01 AM0comments
သာသနာဥသျှောင်အဖွဲ့ ၏ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းကျေညာချက်
နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးမှု သာသနာ့ဥသျှောင်အဖွဲ့ ရှုတ်ချ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ချမှတ်နေတာတွေဟာ တရားလက်လွတ် ဖြစ်လွန်း
လှတဲ့အတွက် နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ် သိပ်ပြီး ၀မ်းနည်းစရာကောင်းလွန်းနေပြီလို့ ပီနန်း
ဆရာတော်ဘုရားကြီးက မိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။ ပီနန်းဆရာတော်ဟာ အမေရိကန်
ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက် သာသနာ့မောလိခေါ် သာသနာ့ဥသျှောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
မြန်မာရဟန်းတော်များအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော်ကြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သာသနာ့
မောလိအဖွဲ့က နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံတခုကိုလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲ လုပ်ခဲ့ပါသေး
တယ်။ အကြောင်းစုံကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြပေးထား
သာသနာ့မောလိအဖွဲ့ရဲ့ ပထမဆုံး နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံကို ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၁
ရက်နဲ့ ၂၂ ရက်နေ့တွေမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူးယောက်ခ်မြို့တော်မှာ
ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီညီလာခံကို ဥက္ကဋ္ဌ ပီနန်းဆရာတော်ကြီး အမှူးပြုတဲ့ သံဃာ
တော် ၂၅ ပါး တက်ရောက်ပြီး အောင်အောင်မြင်မြင် ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ သာသနာ့
မောလိအဖွဲ့ရဲ့ ညီလာခံအပြီး ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
သာသနာ့မောလိအဖွဲ့ကို ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် စက်တင်ဘာလ ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုအပြီး ဖွဲ့စည်း
ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ အဲဒီ ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ဖမ်းဆီး
ထားသူတွေကို နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေ ချမှတ်နေတာမို့ ဒီအပေါ်မှာ ပီနန်းဆရာတော်
ကြီးရဲ့အမြင်ကို ဗွီအိုအေက လျှောက်ထားမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
"ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်လာတဲ့ ဆရာတော်တွေက အစိုးရကိုလည်း ဘာမှ
ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို တင်ပြတာ၊ မေတ္တာရပ်ခံပြီး
တော့ ဖြေရှင်းပေးဖို့ပြောတာကို အခုလို ထောင်ချတာ၊ ထောင်ကလည်း အပြစ်မရှိဘဲနဲ့
တရားဥပဒေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်းဥပဒေနဲ့ပဲပြောပြော၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
ဥပဒေနဲ့ပဲပြောပြော၊ တရားတော်နဲ့လည်း မညီတဲ့အတွက် ဗမာပြည်မှာ အားလုံး
အတွက် ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့။
"ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တရားဥပဒေသည် ဗမာပြည်မှာ လုံးဝ ချုပ်ငြိမ်းသလောက်
ဖြစ်နေပြီဆိုတော့၊ ကိုယ်နဲ့မနှစ်သက်တဲ့လူကို တရားမျှတသလား၊ မမျှတသလား၊
တရားတော်နဲ့ ညီသလား၊ မညီသလားဆိုတဲ့ဟာတွေကို စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုနည်းပြီးတော့
အဲဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက် ဗမာပြည်ရဲ့အနာဂတ်က သိပ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်လို့
သာသနာ့ဥသျှောင်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းထူထောင်ပြီး တနှစ်အတွင်း သာသနာတော်အကျိုး၊ ဒုက္ခ
ရောက်နေသူတွေအကျိုးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတ၀န်း အဖွဲ့ခွဲပေါင်း နိုင်ငံ ၂၀ မှာ
ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တာ၊ နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဘေးဒဏ်သင့်ခဲ့သူတွေကို ကူညီထောက်ပံ့
ဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာတွေဟာ အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်း ပီနန်း
ရှေ့ဆက်ပြီး လုပ်ဆောင်သွားဖို့ လျာထားတာတွေထဲမှာ အဓိကအကျဆုံးလုပ်ငန်းအဖြစ်
သတ်မှတ်ထားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ဆရာတော်ကြီးက အခုလို ဆက်လက်
"အထူးသဖြင့် ဘုန်းကြီးတို့ သာသနာ့ဥသျှောင်အဖွဲ့အနေနဲ့ သာသနာတော်ကြီး စည်ပင်
ပြန့်ပွားဖို့၊ သာသနာတော်ကြီး ကြီးပွားဖို့ လုပ်ကြတာပါ။ အဲလိုကြီးပွားအောင် လုပ်တဲ့
နေရာမှာ သာသနာပြုလုပ်ငန်း၊ သာသနာကို ကြီးပွားအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာ အဲဒီ
အထဲမှာ ကြီးပွားအောင် မလုပ်ခင်စပ်ကြား သာသနာ့အန္တရာယ်တွေက ရှိတော့
ဒီသာသနာ့အန္တရာယ်တွေကို ကာကွယ်သွားဖို့က အထူးလိုအပ်တယ်လို့ ဘုန်းကြီးတို့
"ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် အလုပ်တခုလုပ်တဲ့အခါမှာ အနှောင့်အယှက်တွေ ရှိသလိုပေါ့။
အလုပ်တခု လုပ်တယ်ဆိုတာ တန်းလုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ အဖျက်အဆီးတွေ၊
အနှောင့်အယှက်တွေ ဖြစ်လာတဲ့အတွက် အဲဒီအနှောင့်အယှက်တွေကို ဘုန်းကြီးတို့
အထူးသဖြင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးတို့
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်များအဖွဲ့က အဲဒါကို ဦးထိပ်ထားလုပ်ဆောင်ဖို့
အားလုံးကို ညွှန်ကြား တိုက်တွန်းထားပါတယ်။"
သာသနာ့ဥသျှောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်များအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ပီနန်း
ဆရာတော်ကြီး မိန့်ကြားသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သာသနာ့ဥသျှောင်အဖွဲ့ရဲ့ နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံကနေ ပြည်တွင်းမှာ မတရားဖမ်းဆီး
နှိပ်စက်ခံနေရတဲ့ ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသားပြည်သူတွေကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာတွေ၊
မတရားပြုမူတာတွေ အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့နဲ့ အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ လေးလေးနက်နက်
မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့လည်း ညီလာခံအပြီး ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြ
Posted by yahutha at 12:44 AM0comments
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀ ကျော်အရောက်အပေါက် ခက်ခဲလှတဲ့ ထောင်တွေဆီကို ရွှေ့ပစ်နေ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်ထဲမှာ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ချခံခဲ့ရသူ မဟန်နီဦး
အပါအ၀င် အယောက် ၂၀ ကျော်ကို မိသားစုနဲ့ဝေးတဲ့ ထောင်တွေဆီကို အာဏာပိုင်
တွေက ရွှေ့ပစ်နေပါပြီ။ ဒီအထဲမှာ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရော၊
အန်န်အယ်လ်ဒီ ပါတီဝင်တွေပါ ပါဝင်ကြပါတယ်။ အရောက်အပေါက် ခက်ခဲလှတဲ့
ထောင်တွေဆီကို ရွှေ့ပစ်နေတာဟာ ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်
အရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ထိတွေ့လို့မရအောင်၊ ထောင်တွင်း
သတင်းတွေကို ကမ္ဘာကမသိနိုင်အောင် စီစဉ်လုပ်နေတာလို့ ထိုင်းအခြေစိုက် နိုင်ငံရေး
အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (အေအေပီပီ) က ပြောလိုက်ပါတယ်။
အကြောင်းစုံကို ကိုကျော်အောင်လွင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒီနေ့ ထောင်တွေကို ပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့စာရင်းကို အန်န်အယ်လ်ဒီပါတီဝင် လူငယ်တဦး
"ဒီနေ့ ထောင်ပြောင်းတာ ၁၈ ယောက်ရှိတယ်။ သန့်ဇော်မြင့် လှိုင်သာယာက သထုံ၊
ရဲမြတ်ဟိန်းက ကလေး၊ ကိုထွန်းထွန်းနိုင်က မိတ္ထီလာ၊ ဦးသဒ္ဒမခေါ် သက်ဇော်ကို
မိတ္ထီလာ၊ ရှဲခေါ် အောင်သိန်းလွင်ကို ဗန်းမော်၊ စိုးမြင့်ထိန်ကို တောင်ကြီး၊ လူတင်ဝင်း
ထားဝယ်၊ နေလင်းအောင်နဲ့ ကျော်ကျော် ပေါင်းတည်၊ မဟန်နီဦး လားရှိုး၊
မကြည်ကြည်ဝါ ပေါင်းတည်၊ မအိ ပေါင်းတည်၊ မငယ် သာယာဝတီ၊ သန်းလွင်ဦး
ထားဝယ်၊ အောင်မင်းနိုင်ခေါ် သားကြီး မော်လမြိုင်၊ မျိုးခိုင်ခေါ် ကုလားလေး သာယာ
၀တီ၊ ရဲမင်းဦး မြင်းခြံ၊ ဦးဉာဏ်ဝင်းခေါ် ဦးဇာဏေယျ မိတ္ထီလာ"
အခုနောက်ဆုံးသိရတဲ့ သတင်းတွေအရ စုစုပေါင်း ၂၁ ယောက် ထောင်ပြောင်းရွှေ့ခံရ
တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီလူတွေက ကိုလှိုင်မင်း သီပေါထောင်၊ ကိုမျိုးရန်နောင်သိန်းက
သံတွဲထောင်၊ ကိုမျိုးခင်က ဗန်းမော်ထောင်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို မိသားစုတွေနဲ့ ဝေးလံတဲ့ ထောင်တွေကို ပြောင်းရွှေ့တဲ့အတွက် ထောင်ဝင်စာ
သွားတွေ့ဖို့ မိသားစုတွေအနေနဲ့ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ ဒီနေ့ ထောင်ပြောင်း
ခံလိုက်ရတဲ့ မကြည်ကြည်ဝါရဲ့ မောင်ဖြစ်သူက အခုလိုပြောပါတယ်။
"အခက်အခဲကတော့ အများကြီးပေါ့၊ ရန်ကုန်မှာကျတော့လည်း ထောင်ဝင်စာတွေ့လို့
မရ၊ ဘာမရနဲ့။ နယ်ဝေးဘက်ကိုပို့လိုက်တော့ မိသားစုတွေမှာ အခု ဘယ်လိုလုပ်လို့
လုပ်ရမှန်းမသိတဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ရောက်နေတာပေါ့။ လက်ထဲမှာ သူတို့ကိုတွေ့ဖို့
အတွက် ပိုက်ဆံမရှိတာတို့၊ လမ်းစရိတ်မရှိတာတို့ အဲလို အခက်အခဲတွေနဲ့ အကုန်လုံး
မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်က အခုလို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ဘာဖြစ်လို့ ဝေးလံတဲ့
ထောင်တွေဆီ တဦးချင်းစီ ခွဲပြီးပို့နေရလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တော့ မပေးပါဘူး။
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်
ရေးအသင်း မြန်မာနိုင်ငံ (အေအေပီပီ-ဘီ) ရဲ့ အတွင်းရေးမှူး ကိုတိတ်နိုင်က သူ့ရဲ့
"အဓိကကတော့ သူတို့ကို နိုင်ငံတကာမြင်ကွင်းမှာ မရှိစေချင်ဘူး။ တခြား သတင်း
အချက်အလက်တွေအရရော သူတို့ကို နီးနီးစပ်စပ် မရှိစေချင်လို့ ထောင်ပြောင်းလိုက်
တာဖြစ်တယ်။ ဒါက ထောင်ပြောင်းတဲ့ကိစ္စတခုပါ။ ဒါပေမယ့် တယောက်ကို တထောင်
စီ ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ အဓိကက သူတို့တင်မက သူတို့မိသားစုတွေပါ
ဒုက္ခရောက်စေတော့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိပါတယ်။"
"ဥပမာ အင်းစိန်ထောင်မှာရှိတယ်ဆိုရင် ဘာပဲပြောပြော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့
အခြေအနေ၊ သူတို့ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံလိုက်ရမှု အခြေအနေတွေ၊ စတဲ့
သတင်းအချက်အလက်တွေ ပြင်ပကိုရောက်ဖို့ နီးစပ်တယ်။ ဒီနေရာမှာ သူတို့ကို မရှိစေ
"နောက်တခုက နာမည်ရှိတဲ့လူတွေဆိုရင် မြို့နဲ့ပိုဝေးတဲ့ ဒေသမှာရှိတဲ့ ထောင်တွေကို
ပို့တယ်။ အညိုရောင်နယ်မြေဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်နိုင်ငံခြားသားမှ သွားလို့မရတဲ့
နေရာတွေဖြစ်တယ်။ အဲလိုပို့လိုက်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့အနေနဲ့ အကြောင်းပြချက်တခု
"မစ္စတာကင်တားနားတို့ သွားမယ်ဆိုရင်တောင်မှ၊ ဥပမာ မင်းကိုနိုင်ကို တွေ့ချင်တယ်
ဆိုရင် သွားတွေ့လို့မရတော့ဘူး၊ ကိုပြုံးချိုကို တွေ့ချင်တယ်ဆိုရင် သွားတွေ့လို့မရတော့
ဘူး။ ကော့သောင်းကို နိုင်ငံခြားသား မြန်မာပြည်ထဲကနေ ဖြတ်သွားလာခွင့်မရှိဘူး။
အဲဒါက နိုင်ငံတကာ မျက်စိအောက်ကနေ၊ နိုင်ငံတကာ မြင်ကွင်းအောက်ကနေ
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းက ကိုတိတ်နိုင် ရှင်းပြ
မြန်မာစစ်အစိုးရက အခုလို ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားနေသူတွေကို နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်
တွေချမှတ်၊ ဝေးလံတဲ့ထောင်တွေကို ပို့နေတာဟာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေပဲ
လို့ နိုင်ငံတကာက ပြောဆိုနေကြပေမယ့် မြန်မာအာဏာပိုင်တွေဘက်ကတော့
ဘယ်လိုမှ တုံ့ပြန်ချက်တွေ မပေးပါဘူး။ ဖမ်းဆီးထားပြီး ထောင်ဒဏ်မချမှတ်သေးတဲ့
သူတွေလည်း အများအပြား ကျန်နေပါသေးတယ်။
Posted by yahutha at 12:29 AM0comments
Posted by yahutha at 12:18 AM0comments
88 ကြိမ်မြောက် အမျိုးသားနေ့ အထိမ်းအမှတ် in fort wayne.
88 Th National Day
Posted by yahutha at 12:13 AM0comments
Posted by yahutha at 11:50 PM0comments
Posted by yahutha at 4:41 PM0comments
ကျောင်းသားလူငယ်ခေါင်းဆောင်များကို သာမက ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များကိုပါ ပြစ်ဒဏ်ပေး
မြင့်မောင် သောကြာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 21 2008 22:26 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအား ဝေးလံခေါင်ဖျား ဒေသများရှိ ထောင်များသို့ အာဏာပိုင်များက ပြောင်းရွှေ့လိုက်သဖြင့် မိသားစုဝင်များအနေဖြင့် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရတော့မည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရက ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများနှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်များအား ယခုလ ဒုတိယပတ်အတွင်းမှ စတင်ကာ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ပြီး၊ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသရှိ အကျဉ်းထောင်များသို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်သည့်အတွက် အခက်အခဲဖြစ်ရကြောင်း မိသားစုဝင်များက ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ထောင်ရောက် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုပဏ္ဍိတ်ထွန်း၏ မိခင်က "ဘယ်လို သွားရမယ်ဆိုတာကို မသိလို့ မြန်မာပြည်မြေပုံကို ကြည့်နေရတယ်။ ဘယ်လို သွားရမယ်ဆိုတာတောင် မသိသေးဘူး။ ဝေးလံတဲ့ ဒေသတွေကို အပြစ်မရှိတဲ့ လူတွေ ချုပ်ထားတဲ့အပြင် အပြစ်မဲ့တဲ့ မိသားစုကို ဒုက္ခ ရောက်အောင် လုပ်တာနဲ့ အတူတူပဲ" ဟု ပြောသည်။
သူက "လမ်းစရိတ်ကြီးပဲ ၁ သိန်းခွဲလောက် ကုန်မယ်။ တခေါက်ကို အနည်းဆုံး ၃ သိန်းလောက် ကုန်မယ်။ ရေရှည် ခံနိုင်မှု ရှိ၊ မရှိ၊ မိမိအနေနဲ့ ငွေကြေး ဖူလုံမှု ရှိ၊ မရှိကို အကုန်လုံး တွက်ချက်လုပ်ရမယ်" ဟု ဆက်ပြောသည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးအား ရှမ်းပြည်နယ် ကျိုင်းတုံထောင်သို့ ပို့ဆောင်လိုက်သည်ဟု သတင်းကြားသော်လည်း ယခုအချိန်ထိ ကျိုင်းတုံအကျဉ်းစခန်းသို့ မရောက်ရှိသေးကြောင်း ညီဖြစ်သူ ကိုအောင်အောင်ထွန်းက ပြောသည်။
သူက "ကျိုင်းတုံထောင်ကို ပို့လိုက်တယ်လို့ ပြောတယ်၊ ကျိုင်းတုံကို လှမ်းစုံစမ်းတော့ မရောက်သေးဘူးတဲ့။ အခု ဘယ်ရောက်နေလဲတော့ မသိဘူး။ အခက်အခဲတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ မြန်မာပြည်မြေပုံကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဟိုဘက်ထိပ် ဒီဘက်ထိပ်ပေါ့။ တော်တော်ကို ဝေးတယ်။ သူ ဘယ်နေရာ ရောက်ရောက် သွားတွေ့ရမှာပဲ" ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုကော်မတီက ယမန်နေ့က ကြေညာချက်တရပ် ထုတ်ပြန်ရာတွင် "ယခုလို ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များအား ပြစ်ဒဏ်ကြီးများ ချမှတ်ခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ မိသားစုများနှင့် ဝေလံသော ဒေသများသို့ ထောင်ပြောင်းရွှေ့လိုက်ခြင်းသည် ကျောင်းသားလူငယ် ခေါင်းဆောင်များကို သာမက ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များကိုပါ ပြစ်ဒဏ်ပေးသလို ဖြစ်နေသည်" ဟု ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။
ပါတီပြောခွင့်ရ ဦးဥာဏ်ဝင်းက "ကျနော်တို့က ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း မရှိပါဘူး။ အကူအညီ ပေးနိုင်တာက ရောက်သွားတဲ့ နေရာတွေမှာ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းမရှိရင် ကျနော်တို့ ပါတီဝင်တွေက ကူညီတယ်" ဟု ပြောသည်။
ယင်းလုပ်ရပ်သည် ကာယကံရှင်များ၊ မိသားစုများနှင့် ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူများအား စိုးရိမ်စေသည်သာမက လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို ပြေလည်အောင် ညှိုနိုင်းဖြေရှင်းပေးရမည့်အစား ပိုမိုခက်ခဲလာနိုင်စေသော သဘောကိုလည်း ဆောင်နေကြောင်းနှင့် ထိုမျှမက အနာဂတ် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောက၏ မျိုးဆက်သစ် ခေါင်းဆောင်မှုအား ပိတ်ပင်တားဆီးဟန့်တားသည့် အဓိပ္ပာယ်မျိုးလည်း သက်ရောက်လျက်သည်ဟုလည်း အန်အယ်ဒီ ကြေညာချက်က ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။
နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်များချမှတ်ခံထားရသည့် သူများထဲတွင် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ၃၀ ခန့်၊ အန်အယ်ဒီ အဖွဲ့ဝင် ၆၀ ကျော်နှင့် နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ၂၀ ကျော်ရှိကြောင်း ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
Posted by yahutha at 12:49 PM0comments
Posted by yahutha at 12:41 PM0comments
Posted by yahutha at 12:20 PM0comments
Posted by yahutha at 3:41 AM0comments
Posted by yahutha at 3:38 AM0comments
နိုင်ငံကျော် လူရွှင်တော် ဇာဂနာ (စက်တင်ဘာ ၂၀၀၇)
Posted by yahutha at 2:25 AM0comments
၁၉၈၈-၂၀၀၂ မြန်မာ့နိုင်ငံ ရေးဖြစ်စဉ် ထူးခြားမှု ရက်စွဲ မှတ်တမ်းများ
နောက်ထပ် GW အဖွဲ့ဝင် ၅ ဦး ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်စီချမှတ်
နန်းဒေ၀ီ ကြာသပတေးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 20 2008 19:49 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ Hip-Hop အဆိုတော်နှင့် Generation Wave – GW အဖွဲ့ဝင် ကိုဇေယျာသော် (ခ) ကျော်ကျော်နည်းတူ အင်းစိန်ထောင်တွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသူ အခြား အဖွဲ့ဝင် ၅ ဦးလည်း ယနေ့တွင် ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်စီ ချမှတ်ခံရသည်။
ယနေ့တွင် ကိုဇေယျာသော်အား တရားမ၀င်အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းမှု၊ နိုင်ငံခြားငွေ လက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်မှုတို့ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၆ နှစ်ချမှတ်ခဲ့သလို၊ အခြား GW အဖွဲ့ဝင် ကိုအောင်ဇေဖြိုး၊ ကိုအာကာဘို၊ ကိုသီဟ၀င်းတင်၊ ကိုဝေလင်းဖြိုးနှင့် ကိုရန်နိုင်သူတို့လည်း ရန်ကုန်တိုင်း လမ်းမတော်မြို့နယ် တရားရုံးမှပင် တရားမ၀င် အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းမှု စွဲချက်ဖြင့် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်စီ ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
"ခံစားရတယ်။ အမည်မဖော်နိုင်အောင်ကို ခံစားရတယ်။ ငါးနှစ်ဆိုတာ ကျမတို့အတိုင်းတာအရ များပါတယ်။ သားက ME မပြီးသေးဘူးလေ။ ပညာရေးအတွက် အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့" ဟု တရားရုံးသို့ ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ကြားနာခဲ့သူ ကိုအောင်ဇေဖြိုး၏ မိခင် ဒေါ်ကျင်စန်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဘိုခိုင်ကလည်း "အန်ကန်တို့တော့ အယူခံဝင်မယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဗဟိုအထိတက်ဖို့ ရှေ့နေတွေနဲ့ တိုင်ပင်သွားမယ်" ဟု ပြောသည်။
တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်ပြီးနောက် အင်းစိန်ထောင်ကားဖြင့် ကိုအောင်ဇေဖြိုးအား ခေါ်ထုတ်သွားစဉ် တရားခွင်တွင် လာရောက်၍ အမှုနားထောင်သည့် သွေးကြောကျဉ်းဝေဒနာ ခံစားနေရသူ မိခင်မှာ ရုတ်တရက် သတိလစ်သွားခဲ့ရာ ဗဟိုစည် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွင် ခေတ္တဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့ရသည်။ ယခုအခါ ပြန်လည် သက်သာလာပြီ ဖြစ်သည်။
အာဏာပိုင်များမှ တရားမ၀င် အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းမှု ပုဒ်မ ၆ ̸ ၈၈ ဖြင့် ကိုအောင်ဇေဖြိုးအား ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် ချမှတ်ခဲ့သော်လည်း မိဘများအနေဖြင့် ၄င်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပတ်သက်မှုရှိသည်ဟု မသိရှိခဲ့ရကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူက ယခုလို ပြောဆိုသည်။
"သားက ကျောင်းတဖက်၊ ကားအရောင်းအ၀ယ်ကတဖက်၊ ME တက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်စာကျူရှင် တက်နေတာ။ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ ပတ်သက်နေခဲ့တာ မသိခဲ့ဘူး။ ဖမ်းပြီးတော့ ဗဟန်းရဲစခန်းကနေ လမ်းမတော်ကို ပြောင်းပြီး ဘာအမှုဆိုတာ ပြောပြမှပဲ ဒေါ်ဒေါ် သိခဲ့ရတယ်" ဟု မိခင် ဒေါ်ကျင်စန်းက ပြောသည်။
ကိုအောင်ဇေဖြိုးသည် အင်ဂျင်နီယာ မဟာဘွဲ့ပညာ ဆက်လက်ဆည်းပူးနေသည့် ကျောင်းသားဖြစ်သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် GW ခေါ် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များအစည်းအရုံးသည် ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးနှင့်အတူ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည့် လူငယ်အဖွဲ့စည်းတခုဖြစ်ကာ စစ်အစိုးရအား ဆန့်ကျင်သည့် တေးသီချင်းများ ရေးစပ်ခြင်းဖြင့် ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားမှုတွင် အကြမ်းမဖက် နည်းလမ်းများဖြင့် လှုပ်ရှားနေသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
Posted by yahutha at 2:03 AM0comments
Posted by yahutha at 1:53 AM0comments
Posted by yahutha at 1:48 AM0comments
ဇာနည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 19 2008 17:35 - မြန်မာစံတော်ချိန်